यी रुसी सुन्दरी जसले कोरोना संक्रमणको खोप बनाउने पहिलो बैज्ञानिक संग सह-वास गर्ने दाबि गरेकी थिइन् , के भयो उनको यो अफर ? – Sandesh Press
May 19, 2021 544
चीनको वुहान सहरबाट पूरा दुनियाँमा फैलिएको कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको छ । यो भाइरसले झण्डै ३५ लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। १६ करोड बढि संक्रमित भएका छन् ।
कोरोनाको दोश्रो लहर पनि आइसकेको छ । भाइरसले पनि स्वरुप फेरिररहेको छ । यो दोश्रो लहर कतै तेश्रो लहरको कोरोना फैलनबाट रोक्न धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । सबै देश यो भाइरसबाट बाँच्ने भ्याक्सिनको पाउन खोजेका छन्, कतिले भ्याक्सिन लगाइसके भने कति खोजि मै छन् । यसको भ्याक्सिन आएको पनि धेरै महिना भएको छ ।
यसैबीच गत बर्ष एक अंग्रेजी वेभसाइटमा प्रकाशित खबरले सबैलाई चकित बनाएको थियो । वेभसाइटमा निलो चलचित्र इन्डस्ट्रीकी चर्चित रसियन स्टार लोला टेलरले अनौठो घोषणा गरेकी थिइन् ।
‘जुन डाक्टर या शोधकर्ताले कोरोना भाइरस नष्ट गर्ने भ्याक्सिन बनाउँछ म उसको ओच्छ्यानमा जान तयार छु’, लोला टेलरले भनेकी थिइन् । उनका अनुसार यो भाइरसका कारण त्यस इन्डस्ट्रीको ९० प्रतिशत काम बन्द भएको थियो । सबैजना चिन्तित थिए ।
उनी आफैं पनि घरबाहिर जान पाएकी थिइनन् । उनी मास्कोमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । लोला टेलरको खास नाम ल्‍युबोभ बुसुयेवा हो । उनी इन्डस्ट्रीमा लोला टेलरको नामबाट चिनिन्छिन् । लोला रूसकी हुन् । अहिले उनी त्यो घोषणाको कारण चर्चामा थिइन् ।
अहिले त खोप पनि पत्ता लागिसक्यो । सबै देशहरु खोपको आशमा छन् । धेरैलाई भने यी सुन्दरीको बचन याद आयो तर उनी भनै आफ्नो बाचा आफैंले भूलिन् । उनले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् भने कुनै बैज्ञानिक पनि अहिलेसम्म उनीकहाँ दावी प्रस्तुत गर्दै पुगेका छैनन् ।
Prevयी कस्ता श्रीमान जसले कोरोना पुष्टी भएको आफ्नै गर्भवती श्रीमतीलाई बेवारिसे छाडे
Nextम’र्दा–प’र्दा छिमेकी नै काम लाग्ने’ भन्ने उखान यहाँ लागू हुन सकेन, कसैले श’व उठाउन नमानेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष आँफैले संक्रमितको श’व उठाई व्यवस्थापन गरे !
बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कति पुग्यो?